म्याट कालो रसोईको नल सफा गाइडहरू
घर / नल गाईड / कसरी म्याट कालो रसोईको नल सफा गर्ने
2021 / 01 / 28 वर्गीकरणनल गाईड 1584 0
म्याट कालो दृश्यको नल र अन्य भान्छा र बाथरूमको फिक्स्चरको लागि अधिक आधुनिक समाप्तिमध्ये एक हो, र यो एक लोकप्रिय हो। अद्भुत बोल्ड र color्ग र म्याट फिनिशको विलासी शीन बीच, यी नलहरू विश्वभर घरहरूमा लोकप्रिय छन्।
अवश्य पनि, तपाइँको faucets स्थापना पछि, तपाइँ तिनीहरू पनी उनीहरूको उत्तम रूपमा रहनको लागि निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ। तिनीहरू सबै ध्यान दिएर उनीहरूको उपचार गर्न तल आउँदछन् र सही उत्पादनहरू र प्रविधिहरू सफा गर्न प्रयोग गरेर। यसलाई तपाईको म्याट कालो भान्साकोठामा राख्नुपर्नेछ जुन आउँदो बर्ष ताजा देखिन्छ।
किन मलाई मेरो म्याट कालो सफा गर्न आवश्यक छ भान्साको नल?
सब भन्दा स्पष्ट कारण मान्छे आफ्नो मैट कालो faucets सफा दृश्य अपील को लागी हो। जब पानीको दागहरू र अन्य सतहको अवशेषहरू तपाईंको नलहरूमा पुग्दछन्, तिनीहरू स्वच्छ, पातलो र अवरोध गर्दछन जसले तपाईंलाई पहिलो स्थानमा मैट फिनिशमा आकर्षित गर्दछ। एक साधारण सफाई बक्स महिमा बाहिर यसको ताजा स्थापित, मा faucets फिर्ता गर्न सक्दछ।
केहि केसहरूमा, यद्यपि, तपाइँको faucets सफा गर्न धेरै लामो पर्खाइले नललाई पनि नोक्सान गर्न सक्दछ। यदि कुनै सामग्री एसिड, सॉल्भेन्ट्स, वा अन्य कठोर रसायनहरूको सम्पर्कमा आउँदछ र तिनीहरू नलमा केही समयको लागि बस्दछन् भने तिनीहरू समाप्त हुन्छन्।
कति पटक मैले मेरो नल सफा गर्नुपर्छ?
सामान्य रूपमा, जब तपाईंको भान्साको नल सफा गर्न आवश्यक हुन्छ, तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुनेछ किनकि तपाईं सतहमा दागहरू देख्नुहुनेछ। जीवन सजिलो बनाउनको लागि, यद्यपि तपाईको साप्ताहिक सफाइ तालिकामा नल सफाइ मात्र थप्नु उत्तम हो। कुनै पनि समय तपाईं आफ्नो भान्साको घर सफा गर्दै हुनुहुन्छ, तल विस्तृत चरणहरू प्रयोग गरेर नललाई द्रुत सफाई दिनुहोस्।
तपाईंको म्याट कालो नल सफा गर्नका लागि सुरक्षित उत्पादनहरू
तपाईको घरमा प्रत्येक प्रकारको सतह, साथै नल सतहहरू सहित, केहि सफाई उत्पादहरू र उपकरणहरू छन् जुन राम्रोसँग काम गर्दछन् र अन्यहरू तपाईंले बेवास्ता गर्नु पर्छ। म्याट कालो किचन किल faucets को लागी, यी साधारण उत्पादनहरु मा छडी।
सादा साबुन पानी
म्याट कालोको मामलामा, सुरक्षित सफाई छनौट एक साधारण एक हो: आधारभूत साबुन पानी।
एक pH संतुलित डिश साबुन प्रयोग गर्नुहोस् - यसको मतलब यो हो कि साबुन तेजाबयुक्त छैन। केवल पानीको साथ डिश साबुन को एक सानो रकम मिक्स र तपाईं जान तयार हुनुहुन्छ।
विशेषता मैट सतह क्लीनर
यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि यदि तपाइँको थाली साबुन पीएच-सन्तुलित छ भने, त्यहाँ विशेष क्लिनरहरू पनि छन् म्याट सतहहरूको लागि डिजाइन गरिएको। यी सफाई सफ्टवेयरको प्राथमिक विशेषता यो हो कि यसमा कुनै पनि साधारण रसायनहरू समावेश गर्दैनन् जसले म्याट फिनिशलाई नोक्सान गर्न सक्दछ, जुन हामी तल छलफल गर्नेछौं।
जब तपाईं आफ्नो म्याट कालो नल सफा गर्दै हुनुहुन्छ, स्टिल ऊन, स्क्र्याचि ब्रशेज, र अन्य आईटमहरू छोड्नुहोस् र माइक्रोफाइबर कपडामा पुग्नुहोस्। यी कपडाहरू विशेष गरी नरम र चिल्लो हुन्छन् त्यसैले तिनीहरू तपाईंको नलको टुक्राहरूको सुरक्षा गर्न कोमल छन्।
सफाई उत्पादनहरू र म्याट कालो फिक्स्चरमा जोगिन विधिहरू
हामी सबैले समय पाएका छौं जब हामीसँग सिफारिश सफा गर्ने सामानहरू थिएन हामी घर वरिपरिको केहि गरेर गरौं। त्यो खतरनाक हुन सक्छ, यद्यपि यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि कुन आईटमहरू विशेष रूपमा बेवास्ता गर्न सकिन्छ। तपाइँको म्याट कालो faucets सफा गर्दा यी उत्पादनहरूको सफा गर्नुहोस्।
एक मैन वा भरिने एजेन्टको साथ कुनै उत्पाद
म्याट कालो faucets को सब भन्दा उल्लेखनीय र आकर्षक सुविधाहरु मध्ये एक को चमक को अद्वितीय अभाव हो। निर्माताहरूले यस प्रभावलाई नललाई माइक्रोस्कोपिक रफ सतह बनावट दिएर, राउजहरू, बम्पहरू, र उपत्यकाहरू भरेर उत्पादन गर्छन्।
जब प्रकाशले त्यस सतहमा हिट गर्दछ, खडबडी बनावट खण्डन गर्छ र प्रकाशलाई सबै फरक दिशामा परावर्तन गर्दछ। यसले प्रकाशलाई तितरबित पार्छ त्यसैले कुनै स्पष्ट प्रतिबिम्ब हुँदैन।
वैक्सेस र अन्य भरिने एजेन्टहरूले कार्य गर्ने तरिका सतह अपूर्णताहरू भर्नु हो, चापल सतह बनाउनु जुन एक अलग चमक रहेको छ। यदि तपाईं यी उत्पादनहरू तपाईंको म्याट faucets मा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तिनीहरू सतह मा ती धेरै उद्देश्यपूर्ण रभ्स र घाटीहरू भर्नेछन् र तपाईंको faucets पनि चम्किन्छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यो चम्कि प्रभाव अक्सर समान रूपमा हुँदैन, कि त। तपाईं आफ्नो एक पटक मैट नल मा अजीब चमकदार splotches संग समाप्त हुन सक्छ।
कुनै कास्टिक वा एसिडिक उत्पादन वा उत्पादनहरू सोल्भेन्टहरू भन्दा बढि
अन्य कुनै समाप्त जस्तै, म्याट कालो समाप्त ठीक निर्माता द्वारा लागू गरिएको छ। उत्पादनहरू जसले एसिड वा सॉल्भन्टहरू समावेश गर्दछ त्यो समाप्त हुन्छ। यसले असमान र colors्ग निम्त्याउन सक्छ वा साइन अप तपाइँको नलको जीवनमा प्रारम्भिक लुगा।
घर्षण सफाई उत्पादनहरू
एसिड र सॉल्भन्टहरू मात्र उत्पादनहरू होइनन् जसले म्याट कालो समाप्त गर्न सक्छन्। केही सफाई उत्पादनहरू कठिन मेसहरू सफा गर्नका लागि निर्माण गरिन्छन् त्यसैले तिनीहरूसँग माइक्रोबेड्स जस्तो टेक्स्चराइजिंग एजेन्टहरू हुन सक्छन्। तपाईंको नललाई ताजा पार्ने क्रममा यी प्रकारका सफाई समाधानहरू वेवास्ता गर्नुहोस्।
बनावट सफाई कपडा वा ब्रश
कुनै नलको फिनिश स्क्र्याच हुन सक्छ, र एक मैट कालो समाप्त अपवाद छैन। रिंगहरू, कुञ्जीहरू र अन्य स्क्र्याचि आईटमहरूसँग सावधान हुनुको साथै ब्रश र कुनै पनि प्रकारको कपडा वा सफा उपकरणको प्रयोग नगर्नुहोस् जुन कुनै नराम्रो बनावट हुन्छ।
म कसरी जान्दछु यदि मेरो सफाई उत्पादन म्याट कालो फिक्स्चरको लागि सुरक्षित छ?
के हुन्छ यदि तपाईंसँग एउटा उत्पादन छ जुन माथिको "गर्नुहोस्" वा "नगर्नुहोस्" मा छैन? तपाइँ कसरी जान्नुहुन्छ यदि यो सुरक्षित छ भने?
अन्तमा, जोखिम लिनको लागि यो उत्तम हो। धेरै "सबै-उद्देश्य" उत्पादनहरू जस्तै सामान्य क्लीनरहरूमा एसिडको केही मात्रा हुन्छ। यदि तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्न कि उत्पाद पीएच-सन्तुलित छ वा यदि सामग्री सूचीमा केमिकलहरू छन् जुन तपाईं सुरक्षित हुन जान्नुहुन्न, स्पष्ट स्टियर गर्नुहोस्।
अब जब तपाईंसँग आफ्नो सुरक्षित र प्रभावकारी सफाई उत्पादनहरूको लाइनअप छ, तपाईं कसरी आफ्नो म्याट कालो किचन किल faucets सफा गर्नुहुन्छ? यी साधारण चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
१. तपाईको समाधान मिक्स गर्नुहोस्
अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि, तिनीहरूको सफाई समाधान केवल साबुन र पानी हो। तपाईंको सि s्क वा बाल्टिनमा पानी भर्नुहोस्, साबुनको ड्यास थप गर्नुहोस्, र यसलाई मिलाउन तपाईंको हातले यसलाई वरिपरि हलचल गर्नुहोस्।
२ बाहिरी सतहहरू सफा गर्नुहोस्
तपाईको सफाई समाधान तयार भएपछि सफाई समाधानमा तपाईको माइक्रोफाइबर कपडाहरू भर्नुहोस्। त्यसो भए, यसलाई बाहिर औंल्याउँनुहोस् र यसलाई आफ्नो faucets र फिक्स्चरको बाहिरी मेटाउन प्रयोग गर्नुहोस्।
नल भित्र सफा गर्नुहोस्
नलको बाहिरी सफा गरिसकेपछि, तपाईंको कपडा नलको भित्री वरिपरि पनि चलाउनुहोस्। यदि नलको एरेटर छ भने, धेरै दबाब नलगाउन सावधान हुनुहोस् ताकि तपाईंले एरेरेटरलाई हानी नगर्नुहोस्।
यो गर्नु महत्त्वपूर्ण छ तपाईंले आफ्नो नलको बाहिरी सफा गरिसकेपछि, यो भन्दा पहिले होइन। त्यहाँ निक्षेप र कणहरू हुन सक्छन् तपाईंको faucets भित्र निर्मित, र तपाईं ती कणहरू स्क्र्याच गर्न वा बाह्य फिनिशको पालना गर्न चाहनुहुन्न।
R. कुल्ला र सुख्खा
आफ्नो सफाइ समाधानको साथ तपाईंले आफ्नो नलहरू सफा गरेपछि, तिनीहरूलाई ताजा पानीले पखाल्नुहोस्, ताकि तपाईं कुनै पछाडि नछाड्नुहोस्। अन्त्यमा, नलको बाहिरी भाग सुकाउन माइक्रोफाइबर तौलिया वा माइक्रोफाइबर कपडा प्रयोग गर्नुहोस्।
यस प्रक्रियाले केहि मिनेट भन्दा बढि लिदैन र यो तपाइँको घर मा सरल सफाई रोजगार को एक हुन सक्छ। अझै, यसलाई नियमित आधारमा राख्दा तपाईंको नल नयाँ जस्तो देखिन्छ।
म्याट ब्ल्याक किचनको नलबाट पानीको दागहरू कसरी हटाउने?
माथीको मलबे र नलमा फोहोरको लागि माथिका चरणहरूले ठूलो काम गर्दछ। कहिलेकाँही, तपाईंसँग लगातार पानीको धब्बा हुन सक्छन् जुन हटाउन गाह्रो छ। तपाईं यी जिद्दी स्पटहरू कसरी हटाउनुहुन्छ?
म्याट कालो faucets को लागी, सबै भन्दा राम्रो विकल्प 50% सिरका र 50% पानी को एक समाधान छ। यस समाधानलाई थोरै पानीको दागहरू सफा गर्न प्रयोग गर्नुहोस्, र तुरुन्तै नललाई सफा पानीले पखाल्नुहोस् र यसलाई माइक्रोफाइबर कपडाले सुकाउनुहोस्।
दिमागमा राख्नुहोस् कि केहि पानी स्पटहरू अरु भन्दा धेरै स्थिर छन्। तपाईंको पानीको दागहरू डिश साबुन समाधान वा विशेष म्याट फिनिश क्लीनरको साथ सफा गर्नुहोस्। यदि अरू विकल्पहरूले काम नगरेमा मात्र सिरका समाधान प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको म्याट कालो faucets मा Aerator सफा गर्दै
माथीका चरणहरू सामान्य म्याट कालो नलका लागि सामान्य सफाईको लागि उपयुक्त छन्। जहाँसम्म, यदि तपाईको नलको एरेटर छ भने, तपाईले समय समयमा पनि एरेरेटर सफा गर्नु पर्छ।
एक वायुवाहक तपाईंको नल भित्र सानो स्क्रीन जस्तै देखिन्छ। Aerators तपाईंको पानी फिल्टर बाहिर यो रूपमा आउँछ जबकि पानी को प्रवाह को लागी केही हावा थप्न। यसले स्ट्रिमलाई महीन बनावट दिन्छ।
किन मैले मेरो भान्छाको नल एरेटर सफा गर्नु पर्छ?
एक aerator को रूप मा उपयोगी हुन सक्छ, यसको काम को हिस्सा कणहरू र तपाईंको पानीबाट भण्डारहरू फिल्टर गर्नु हो। ती कणहरू हराउँदैनन्; तिनीहरूले aerator मा वा भित्र निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सफा पानी लिन गाह्रो बनाउँदछ, र केहि अवस्थाहरूमा, कणहरूले तपाईंको नलबाट पानीको प्रवाह रोक्नको लागि पर्याप्त निर्माण गर्न सक्दछन्।
मैले मेरो एयरेटर कति पटक सफा गर्नुपर्छ?
यदि तपाईंसँगको नलमा एरेटर छ भने, तपाईंको सफाई तालिका निर्भर हुनुपर्दछ तपाईं कति पटक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। एक नलको लागि जुन दैनिक आधारमा सामान्य किचन नलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, प्रति महिना एक पटक एरेरेटर सफा गर्नुहोस्। प्रायः प्रयोग नगरिएका नलहरूका लागि, त्रैमासिक सफा गर्ने काम मात्र ठीक हुन्छ।
तपाईं आफ्नो aerator कुनै पनि समय यो भराईएको जस्तो देखिन्छ सफा गर्न पनि चाहानुहुन्छ। यदि तपाईंको नलको पानी प्रवाह खस्केको छ भने, यो अक्सर यो संकेत हो कि तपाईंले आफ्नो एररेटर सफा गर्नु आवश्यक छ।
नल एरेटर सफा कसरी गर्ने
तपाईंको एर्रेटर सफा गर्नु तपाईंको नल सफा गर्नु भन्दा जटिल छ, तर यो अझै केहि मिनेटमा गर्न सकिन्छ र यो तपाईंको फिक्स्चर सुचारु रूपमा चलाउनको लागि आवश्यक अंश हो। यी स्पष्ट चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
१. एरेटर हटाउनुहोस्
धेरै जसो केसहरूमा तपाईको एर्रेटर तपाईको नलको अन्त्यमा स्क्रू क्याप भित्र हुन्छन् ताकि तपाईले त्यसलाई घुसाउन मात्र सक्नुहुनेछ। तपाईंले घुसाउने पिपर्स वा अरू केहि प्रयोग गर्नु पर्ने हुन सक्छ, तर कोमल हुनुहोस् ताकि तपाईंले टुक्रालाई हानी नगर्नुहोस्। यदि तपाइँ तपाइँको एयरेटर कसरी हटाउने भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने, निर्माणकर्ताका निर्देशनहरू जाँच गर्न यो सुरक्षित शर्त हो।
२. तपाईंको सफाई समाधान तयार गर्नुहोस्
तपाईंको नलको बाहिरी सफासँगै, तपाईं आफ्नो एरेरेटर सफा गर्न पानी र डिश साबुनको एक साधारण समाधान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग साँच्चिकै गम्भीर छ भने, तपाईं पनि तीन भाग पानी र एक भाग सिरका को एक घोल मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
E. एरेटर सफा गर्नुहोस्
तपाईको सफाई समाधानको साथ राग, कपडा वा स्पन्ज प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको एर्रेटर सफा गर्न। तपाईं कणहरू खाली फुटेको हेर्न सक्षम हुनुपर्दछ, त्यसैले ती कणहरू धोउन बारम्बार एररेटर कुल्नुहोस्। तपाईं पनि पुरानो टुथब्रश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एररेटर स्क्रिन भित्र सानो खाली स्थानहरूमा जान।
तपाईं बताउन सक्नुहुनेछ कि aerator साधारण दृश्य निरीक्षणको साथ सफा छ। यसलाई अन्तिम कुल्ला दिनुहोस् र त्यसपछि यसलाई सफा कपडा वा तौलियाले सुकाउनुहोस्।
Au. नललाई पुनः जम्मा गर्नुहोस्
तपाइँको एरेटर सफासँग, यो सबै फेरि सँगै राख्ने समय हो। आईटमहरू स्क्रू क्याप भित्र समान क्रममा बदल्नुहोस् जुन तिनीहरू भित्र थिए जब तपाईं तिनीहरूलाई डिस्सेम्बल गर्नुभयो र घुसाउँनुहोस् नलको अन्तमा फिर्ता घुसाउनुहोस्। यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि तपाइँ यो सहि गरिरहनुभएको छ भने, तपाइँको नल निर्माताका निर्देशनहरू जाँच गर्नुहोस्।
प्रत्येक महिना यी कदमहरू पालना गर्दा तपाईंलाई तपाईंको एररेटर सफा र कार्यशील रहन मद्दत गर्दछ, तपाईंको पानीको सफाई बाटोमा राख्नुहोस्। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि यदि तपाईं राम्ररी आफ्नो एयरेटर सफा गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने, तपाईं सम्पूर्ण नल बदल्नुको सट्टा निर्माताबाट प्रतिस्थापन एरेटर किन्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँको म्याट कालो किचन किल faucets ताजा र सफा राख्दै
म्याट कालो faucets एक निर्विवाद रूपले विलासी, आधुनिक, मजाको देखिन्छ, किनकी तिनीहरू सबै क्षेत्रहरु र मूल्य बिन्दुहरु को घरहरु मा लोकप्रिय छ। यद्यपि तिनीहरूले उनीहरूलाई उत्तम देखिन्छन् यदि तपाईंले तिनीहरूलाई स्वच्छ र राम्रोसँग राख्नु भयो भने। भाग्यवस, त्यो एक डिश साबुन, पानी, र एक सफा कपडा हरेक हप्ता वा त को रूपमा सजीलो छ।
यदि तपाईं म्याट कालो faucets को साथ आफ्नो घर को अधिक क्षेत्रहरु विचार गर्दै हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं अझै पहिलो स्थानमा सही भान्छाको faucets को लागी शिकार गर्दै हुनुहुन्छ भने, हाम्रो नल किन्न गाईड जाँच गर्नुहोस्।
म्याट कालो रसोईको नल उत्पादहरू सिफारिश गरियो
एकल-ह्यान्डल पुल-आउट स्प्रेयर किचन नल
कालो वर्ग भान्छा नल
म्याट कालो किचन मिक्सर ट्यापहरू
म्याट कालो पुल-डाउन स्प्रे किचन नल
अघिल्लो :: कसरी बाथरूम नल छनौट गर्न: २०२१ खरीद गाईड अर्को: डेल्टा बाथरूम नल समीक्षा: २०२१ डेल्टा बाथरूम नलका लागि खरीद मार्गनिर्देशन
2021 / 05 / 13 865
2021 / 05 / 09 683
2021 / 05 / 08 622
2021 / 02 / 04 655
2021 / 02 / 03 729
2021 / 02 / 03 778